स्वास्थ्य/जीवनशैली – Page 8 – erupse.com
गर्भपतन बढी हुने जिल्ला कास्की
कास्की नेपालको सबैभन्दा बढी गर्भपतन हुने जिल्लाका रुपमा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विभिन्न सङ्घसंस्थाले गरेको अध्ययन तथा अनुसन्धानले गण्डकी प्रदेशलाई बढी गर्भपतन हुने जिल्लाका रुपमा देखाएको छ । त्यसमा पनि कास्कीमा ८५ प्रतिशत बढी गर्भपतन हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । परिवार नियोजन सङ्घ..
सपनाले वास्तविक जीवनका धेरै पक्षबारे जानकारी दिन्छ । कहिलेकाही नराम्रा सपना देखिन्छन् जसका लगि केही विधि अपनाउनु जरूरी छ । यसो गरेको खण्डमा नराम्रा सपनाको दोष कट्टा हुन्छ । १. खराब सपना देखेर व्युँझियो भने फेरि सुतेपछी उत्त सपनाको असर समाप्त हुन्छ। २. अत्यन्तै अशुभ सपना देखे निम्न श्लोक तीन पटक वा..
हर्टअट्याकको जोखिम यसरी पत्ता लगाउनुहोस्
शनिबार, अशोज १३, २०७५ मा प्रकाशित
हृदयाघातका धेरै कारणहरु हुन्छन् । ती मध्ये प्रमुख कारणहरुमा धुम्रपानको सेवन र उच्च कोलेस्ट्रोल सबभन्दा प्रमुख २ कारणहरु हुन् । नेपाल लगायत संसारका ५० भन्दा बढी देशहरुमा गरिएको एउटा रोचक अध्ययन (INTERHEART) को अनुसार यी दुई कारणहरु सबभन्दा बढी खतरनाक भएको पाइएको छ । ५५ वर्ष भन्दा बढीका पुरुष र ६५ वर्ष..
यी मन्दिरमा पुरुषलाई प्रवेश गर्न दिइदैन
सामान्यतया भगवानमा आस्था रहेका सबैलाई मन्दिरमा पूजाका लागि जान अनुमति माग्नु पर्दैन । तर कतिपय स्थानमा जात, धर्म, संस्कृति,वर्ण लिंगको आधारमा पनि मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइने गरिएको छ । भारतको अदालतले सबरीमाला मन्दिरमा महिला प्रवेशको पक्षमा फैसला गरेको छ । उक्त मन्दिरमा महिलालाई प्रवेशमा रोक..
परिवार नियोजनका बारेमा आम व्यक्तिलाई जानकारी छ तर प्रयोगदर भने न्यून नै रहेको पाइएको छ । परिवार नियोजनका सेवा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रजनन स्वास्थ्य विधेयकले यसलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र समेटेको छ । सन् २०१६ को स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार परिवार नियोजनका बारेमा ९०..
१९ वर्षीय युवतीलाई अनौठो बिरामी : न रुन सक्छिन् न पानी नै पिउन !
ब्रिटेनमा एकजना १९ वर्षीय युवतीलाई अनौठो बिरामी लागेको छ । यो बिरामीका कारण उनी सामान्य व्यक्ति जस्तो बाँच्न सकेकी छैनन् । डेलि मेलमा प्रकाशित समाचार अनुसार, लिण्डसे कुब्ररे नाम गरेकी युवती अरु जस्तो न त रुन सक्छिन्, न पानीमा भिज्न । सुन्दा अनौठा लाग्छ, यी युवतीलाई एक्वाजनिक अर्टकेरिया नाम गरेको..
डा. विवेक पौडेल मौसम परिवर्तनसँगै अहिले भाइरल ज्वरोको बिरामीहरु बढ्दै गएका छन् । शरीरमा ज्वरो आउनु संक्रमणको एउटा लक्षण हो । ज्वरो आफैंमा एउटा रोग हैन । शरीरमा भाइरसको संक्रमण, व्याक्टेरियाको संक्रमणले हुने टाइफाइड, निमोनिया, पिसावको संक्रमण, टन्सिलाइटिस, शरीरमा घाउ, खटिरा, पिलो आदि सयौं कारणले ज्वरो..
ग्यास्ट्रीकले पनि दुख्छ मुटु
डा. ओम मुर्ति अनिल, मुटुरोग विशेषज्ञ हार्ट बर्न (Heart Burn) पेटको समस्या (गयास्ट्रीक) ले छातिको बिच भागमा,घाटिमा वा छातिको देब्रेतिरको तल्लो भागमा पोल्नु वा असजिलो हुनुलाई हार्ट बर्न भनिन्छ । हार्ट अटैक को लक्षण हार्ट बर्न सँग मिल्दोजुल्दो हुने गरेकोले यसलाई यकिन सँग छुट्ट्याउन अत्यन्तै जरुरी हुन्छ ।..
क्यान्सरका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ताजा प्रतिवेदन
क्यान्सर अहिले संसारभरि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ताजा प्रतिवेदनअनुसार, संसारभरि यस वर्ष मात्र १ करोड ८० लाख क्यान्सर केस आउने सम्भावना छ । त्यसमा ९६ लाख मानिसको ज्यान जान सक्छ । इन्टरनेसनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सरको रिपोर्टअनुसार, संसारमा हरेक पाँचमध्ये एक पुरुषलाई..
नुहाउने वित्तिकै यी गल्ती त गरिरहनु भएको छैन् ?
एजेन्सी । दिनभर हामीले केही यस्ता गल्ती गछौँ, जसकारण कपाल झर्ने समस्या सुरु भएको हुन्छ। केही गल्ती यस्ता जस जुन धेरै व्यक्तिहरुले कपाल नुहाएपछि गर्ने गर्छन्। हेयर एण्ड व्यूटी एक्सपर्टका अनुसार नुहाएपछि हाम्रो कपालको जरा कमजोर हुने गर्दछ। त्यो बेला हामीले केही गल्ती गर्यौ भने हाम्रो टुक्रिने तथा..